ARSA ခွဲထွက်ရေးကို စွန့်လွှတ်ပြီး UNFC မှာ ပါဝင်ခွင့်ရအောင် AA ဆောင်ရွက်ပေးပါ့မလား ? | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း ARSA ခွဲထွက်ရေးကို စွန့်လွှတ်ပြီး UNFC မှာ ပါဝင်ခွင့်ရအောင် AA ဆောင်ရွက်ပေးပါ့မလား ?
❖ ARSA အနေနဲ့ အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံအဖြစ် ခွဲထွက်ရေးအစီအစဉ်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ UNFC မှာ ပါဝင်နိုင်အောင် ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (AA) က ကူညီပေးဖို့နဲ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်းတွေမှာ ပါဝင်ခွင့်ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ The Eastern Link သတင်းဌာနက ထုတ်ဖော် ရေးသားထားပါတယ်။
❖ အဲ့ဒီလိုတောင်းဆိုချက်တွေအပေါ် ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (AA) အနေနဲ့ ဘယ်လို သဘောထားမျိုးတွေ ရှိနိုင်မယ်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ UNFC အပါအဝင် အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်က ဘယ်လိုသဘောထားမျိုးတွေ ရှိလာနိုင်ပါမလဲ။
❖ အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးအပေါ် သုံးသပ်သိရှိနိုင်ကြဖို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ (တပ်မတော်အရာရှိ – ငြိမ်း) ဒေါက်တာအောင်မျိုးနဲ့ ဆက်သွယ် ဆွေးနွေး တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Previous articleတရုတ် ဘာကြောင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကို လက်နက်နဲ့ ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့နေတာလဲ ?
Next articleရာသီပေါ်သီးနှံအစား ဒန့်သလွန်ကို အစားထိုးစိုက်ပျိုး အောင်မြင်မှုရရှိ